प्रधानमन्त्रीज्यू कुन बिकल्प रोज्नु हुन्छ सुधारिने की, राजीनामा ? – Kadar News : Oneline Digital News:
प्रधानमन्त्रीज्यू कुन बिकल्प रोज्नु हुन्छ सुधारिने की, राजीनामा ?
प्रकासित : १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार २२:३९
१२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौतर्फी विरोध र पार्टीभित्रबाटै आफूलाई हटाउनेसम्मको अवस्था आएपछि अध्यादेश फिर्ता लिए । तैपनि अझै उनी पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ‘सुरक्षित जोनमा’ छैनन् ।
‘मेरो असल मनसाय थियो, साथीहरूले बुझेनन्’
सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज
तर, बालुवाटारबाट शीर्षनेताको मुस्कानसहितको बैठकको फोटो सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले तत्काल पार्टीको बैठक बोलाएर पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल हुनुपर्ने माग दोर्होयाएका छन् ।
केपी ओली आफ्नै एकलकाँटे र दम्भी स्वाभावका कारण पार्टी्भित्र पहिले नै अल्पमतमा परिसकेका थिए । उनी एक वर्षअघि नै सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । त्यसबेलै वामदेव गौतम लगायतका केही नेताले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने विचार राखिसकेका थिए । तर, त्यसबेला माधव नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको कारक नबन्ने भन्दै दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए । तथापि, नेपालमाथि ओलीको पेलानले सीमा नाघेको थियो । तर, आफूमाथि जति नै पेलान भए पनि नेता नेपालले ओलीको कुर्सी जोगाइदिएकै हुन् ।
माधव नेपाल वा प्रचण्डमध्ये एकजनाको साथ लिएर अर्कोलाई भित्तामा धकेल्ने षडन्त्रकारी व्यवहारबाट माथि उठेनन् भने केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासले ‘राजनेता’ होइन, ‘गुटनेता’ का रुपमा चिन्ने खतरा छ ।
अब प्रचण्ड र ओली पार्टी अध्यक्ष हुने अनि माधव नेपाललाई प्रधामन्त्री बनाउने प्रस्ताव सचिवालयबाट आयो भने के होला ? अनि, ओलीले पार्टी निर्णय नमान्दा उनलाई बहुमतले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने अवस्था आयो भने ?
त्यसअघि नै केही राम्रा काम गरेर छवि सुधार्ने र पार्टीमा प्रचण्डको पकड कमजोर बनाउन माधव नेपाललाई अघि सारेनन् भने नेकपाले ओलीका विकल्प खोज्ने निश्चित